Tijaabinta Haramaha: Toban Loogu talagalay Weed • Dawooyinka Inc.eu
Berri waa maalin. Ku dhawaaqida rasmiga ah ee dawladaha hoose ee ka qaybqaadan doona tijaabada haramaha sanadka 2021. Soo saarista haramaha dawladeed waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo dambiyada abaabulan iyo suuqa xashiishadda madow.
Guddiga Knottnerus ayaa ku dhawaaqi doona Khamiista kuwaas oo lix ilaa degmooyinka 10 ay yihiin kuwa ugu habboon tijaabada weed. Taas macnaheedu waa in degmooyinka hoos u dhacay, kuwaas oo iyaguna iska diiwaangeliyay maxkamadda haramaha. Wakaaladda wararka ee ANP waxay u aragtaa in guddigu doorto Arnhem, Nijmegen, Maastricht, Breda, Almere, Tilburg, Zaanstad, Heerlen, Hellevoetsluis iyo Groningen.
1 Cayayaanka haramaha
2 Isbeddelada jikada Nederland
3 Abaal marin weyn
4 Tag ama tag
Degmooyinka kaqeybgalaya, dhamaan meheradaha qaxwada ayaa dhawaan bilaabi doona iibinta haramaha gobolka ee ay beeran doonaan beeraleyda xashiishadda. Mid ka mid ah shuruudaha sababay in degmooyin badan, oo ay ku jiraan shanta magaalo ee ugu waaweyn, ay ka baxaan. Guddiga Knottnerus ayaa sidoo kale su'aalo ka keenay xaalado badan. Tusaale ahaan, waxaa lagugula taliyay in kabadan toban degmo ineey kaqeybqaataan tijaabada si loo helo sawir wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, taladan lama raacin. Tobankan ayaa umuuqda inay udub dhexaad u yihiin maxkamada maxaa yeelay Knotnnerus ayaa kula taliya ugu badnaan toban beeraley ah. Inbadan oo beeraleyda ah waxay ka dhigeysaa kormeerka mid adag oo beeraleyda yari waxay la micno tahay tartan yar, taas oo noqon karta kharash tayo, kala duwanaansho iyo qiimo. Kuwa beeraleyda ah ee dhowaan soo saari doona xashiishka iyo xashiishka - si sharci ah albaabka hore - waa inay la kulmaan shuruudo adag. 'Dahabka cagaaran' ayaa dhowaan loo geyn doonaa makhaayadaha qaxwada gawaari qaali ah. Xaqiiq qosol leh!
Isbeddelada jikada Nederland
Qeyb kale oo khiyaano ah oo ka mid ah tijaabada ayaa ah noocyada kala duwan ee xashiishka iyo xashiishka. Wareegga albaabka dambe oo leh midabbo badan, ur, dhadhan iyo xoog ayaa loo joojiyay dukaammada kaqeyb galaya. Meesha ay Knottnerus ku talisay 15 nooc oo ah haramaha iyo xashiishka, golaha wasiiradu waxay ka fikiraan xitaa 10 nooc oo hemp ah halkii beereer. Kuwa koraya looma baahna inay ku yaalliin degmooyinka ka qayb galaya. Noocyada xashiishadda sidoo kale ma heli doonaan magacyada xubnaha golaha wasiirrada ama wasiirrada sida 'Rough Rutte' ama 'Grapperhaze'? Xaqiiqdu waxay tahay in nooca albaabka dambe ee hadda ee dukaamo badan oo kafee ahi aad uga ballaaran yahay. Tusaale ahaan, boqolkiiba 20 dhammaan dhagxaanta ayaa sigaar ku cabaya dibedda. Morocco oo kamid ah hogaamiyaasha. In tayo isku mid ah laga beeri karo ciidda Nederland? Waqtigu waa inuu sheegaa.
Abaal marin weyn
Dabcan, dahabka cagaaran ee gobolka waa inuusan ku kacin abaalmarinta ugu sareysa sidoo kale. Tani waa si looga hortago macaamiisha badan inay dib ugu soo dhacaan wareegga madow. Si kastaba ha noqotee, aad u hooseeya sidoo kale ma fiicna, sababtoo ah taasi waxay kicin kartaa isticmaalka, taas oo dabcan aan waxtar u lahayn caafimaadka dadweynaha. Knottnerus wuxuu soo jeediyay sidoo kale in diiradda la saaro ka hortagga. Shaqaalaha dukaamada kafeega ayaa door muhiim ah ka ciyaara tan. Ka fikir talo iyo macluumaad ku saabsan khataraha caafimaad iyo halista balwadda isticmaalka xad-dhaafka ah.
Tag ama tag
Iyada oo laga hadlayo doodaha tubaakada ee hada jira iyo kahortaga cabida sigaarka, waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo xashiishadda adhiga (uumiga) maxaa yeelay taasi waa waqtiyo badan oo ka fiican sigaar cabista laabatada. Sigaar ma leedahay tubaakada? Ugu dambeyntiina, waa in la go’aamiyaa goorta tijaabada haramaha lagu guuleysto? Haddii aad ku guuleysato xakamaynta wareegga dambiilaha oo ay jirto hadal yar oo ku saabsan buuqa, qabatinka ama cawaaqib xumada caafimaadka bulshada ee ka timaadda isticmaalka xashiishadda, waxaad ka hadli kartaa goobta buuriga ah ee baaritaanka haramaha. Si kastaba ha noqotee, guddiga Knottnerus ayaa ka yar baahi badan. Waxay u maleynayaan in tijaabadu ay horeyba u guuleysatay markii dambiyada abaabulay ayan kaalin ka ciyaarin keenista dukaamada qaxwaha.
Toddobaadkan waxaa jiray buuq xun kadib mid ka dib Booqasho shaqo oo booliis Nederlaand ku timid Kanada, halkaas oo cannabis si buuxda loogu sharciyeeyey. Halkaa, sharciyeeynta waxsoosaarka, iibinta iyo adeegsiga uma muuqan inay toos u horseedayso dhimista dambiyada. Diiwaanka kaashka ayaa si buuxda loo buuxin doonaa, ka dibna mar labaad.
Akhri wax dheeraad ah Volkskrant.nl (Xigasho)
dembisharci-dejintaNederlandtijaabinta haramahabaaritaanka weedbeerista cannabis
Cannabis ka soo horjeeda aalkolada: beerashada cannabis sharciga ah waxay halis gelin kartaa warshadaha khamriga
Dalal aad iyo aad u tiro badan ayaa oggolaanaya beerista, iibinta iyo isticmaalka xashiishka. Kanada dhexdeeda, ...
Sidee buufis u kaa caawinayaa inaad joojiso marijuana?
Mawjadaha sharciyeynta ee dalal iyo dalal kala duwan ayaa ah tallaabo kacaan ah oo taariikhda ...